China Polyester fanindroany orinasa mpanamboatra kitapo mangatsiaka etona | Picvalue
Ity kitapo mangatsiaka ity miaraka amin'ny lohataona lamaody na modely fahavaratra dia entana tena mahazatra ary fivarotana mafana tokoa. Tokony ho 17LT izany. Ny paosy eo aloha dia natao ho an'ny zavatra madinidinika toa ny lakile, carte sns sns. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando.
Matetika izahay dia mampiasa sombin-kazo EPE 4-5mm matevina eo anelanelan'ny ivelany sy ny lamba fisoratana mba hafana na hatsiaka. Mazava ho azy fa afaka mampiasa iray matevina ianao mba hahazoana fotoana bebe kokoa.
Isan-taona dia manome modely vaovao 50-100 ho an'ny mpanjifa eran-tany izahay. Tongasoa namboarina ihany koa. Manana efitrano fakan-tahaka matanjaka be izahay. Alefaso amiko ny kantoo, hiverina aminao ny santionany.
Item No. .: ML1084A
Size: 34 * 17 * 34cm
Antsipirian'ny vokatra: 300D polyester miaraka amin'ny valiny PEVA / Aluminium foil. Ny fitaovana dia handalo fitsapana REACH sy Ca 65. Ny lining dia ho fenitry ny fifandraisana amin'ny sakafo.
asa: Ataovy mangatsiaka na mafana mandritra ny 3-4 ora ny sakafo na zava-pisotro. Mety ho an'ny ivelany sy ny fampiroboroboana. Mety amin'ny boaty fisakafoanana koa izy io.
Previous: Kitapo kitapo boribory kely ho an'ny ankizy
Manaraka: Kitapo mangatsiaka fiantsenana polyester ho an'ny morontsiraka
Polyester lamba watertight voaroaka cooler ba ...
Harom-bokatra mangatsiaka vita amin'ny lamba polyester ho an'ny fianakaviana ...
Kitapo marevaka vita amin'ny lamba polyester amin'ny lamaody ...
Kitapo kitapo boribory kely ho an'ny ankizy
Polyester lamba mangatsiatsiaka kitapo 10L amin'ny lamaody de ...
Kitapo mangatsiaka vita amin'ny lamba polyester amin'ny lamaody ...